पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, असार ६ गते आइतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल - Onlinenews Global
June 20, 2021 laxmiLeaveaComment on पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, असार ६ गते आइतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल असार ६ गते आइतबार इश्वी सन २०२१ जुन २० तारीख जेठ शुक्लपक्ष दशमी तिथी चित्रा नक्षत्र परिघ योग गर करण चन्द्रमां तुला राशिमा आनन्दादि योगमा पद्य योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतु गंङ्गादशहरा, रामेश्वरगंगापूजा, वज्रगुरु पद्मसंभवजयन्ती,हत्यामोचन तीर्थस्नान,गोसाई कुण्ड स्नान समाप्ती, रुरु रिडीक्षेत्र, हृषिकशेत्सोव,वेहडाबाबामा जलार्पण गंगा पूजा गंगा दशहरा हत्यामोचन–तीर्थ स्नान विश्व शणनार्थी दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) बौधिक ब्यक्तित्व सँगको भेटघाटले मन हर्सित तुल्याउला । पारीवारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला । आम्दानि क्षेत्र भने मध्यम रहेको छ । भोग बिलासको क्षेत्रमा समय ब्यतित हुन सक्छ । नयाँ कार्यको थालनिले आम्दानि सबल तुल्याउनेछ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) मान्यजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहला । पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । कष्टकर यात्रा रहन सक्छ । शारिरिक आलस्यता ले सताउने छ । सभा समेलनमा सरीक हुने योग रहेको छ । सामान्य कार्यको निम्ती धेरै समय ब्यतित हुनाले मानसीक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) शारीरिक अस्वस्थाका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या आउन सक्छ । सामान्य कार्यको निम्ती धेरै समय ब्यतित हुनाले मानसीक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । मान्य जनको साथ सहयोग पुर्ण रुपमा प्राप्त नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । माल सामान को क्षति ब्यहोर्नू पर्ला सजग रहनु होला ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
हेर्नुहोस सुचना सहित) आगामी साउन १ गते देखि यस्ता मोबाइल नेपालमा नचल्ने !!
भागवत गिता लाइ छोएर ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस् तपाईंले शुभ समाचार अवस्य थाहा पाउनुहुनेछ !
मुक्तिनाथ बाबाले हामी सबैको रक्षा गरुन,साउन ०१ गते शुक्रबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
July 16, 2021 laxmi
July 3, 2021 laxmi